Maxkamadda Sarre ee Kenya oo ansixisay guushii Uhuru Kenyatta - Wargane News
Home World News in Somali Maxkamadda Sarre ee Kenya oo ansixisay guushii Uhuru Kenyatta
Maxkamadda ugu sarreysa dalka Kenya ayaa tuurtay dacwad ka dhan ahayd dib u soo doorashada madaxweyne Uhuru Kenyatta bishii la soo dhaafay.
Lixda garsoore ee dhageysanayay dacwaddan ayaa isku raacay laalida guusha Kenyatta iyagoo meesha ka saaray eedaymaha la soo jeediyay.
Guddoomiyaha garsoorayaasha David Maraaga ayaa sheegay in garsoorayaasha ay 21 bari gudhaood ku bixin doonaan faahfaahin ku aadan sababta ay u ansixiyeen guusha Kenyatta.
Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa ugu baaqay inay qaadacaan doorashadaasi kuceliska ahayd isagoo sheegay in guddiga doorashada uu diiday inuu sameeyo isbadel hubin lahaa in doorashadu ay u hacdo si xaq iyo xor ah.
Weriye ka tirsan BBC-da ayaa ku soo warramaya inuu jira shaki ah in go’aanka maxkamadda ee maanta soo aafjari kara qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka.
Somaliland: Guddoomiyaha Xisbiga KULMIYE Oo Hadhimo-sharafeed Ku Maamuusay Waxgarad Kasoo Jeeda Beelihii Dhawaan Ku Dagaallamay Ceel-Afweyn.